20 imithombo evulekileyo yasimahla ye-HTML5 kunye neetemplate zeCSS3 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Apha ngezantsi ungafumana ama-20 Iitemplate zewebhu ze-HTML5 kunye ne-CSS3 zasimahla ebonelela ngoyilo olukhulu kunye nokuguquguquka ngokuphendula. Zonke ezi Iitemplate ze-HTML5 Banoyilo olukhulu kwaye banemisebenzi ephambili enokuthi ifikeleleke emsebenzini wakho we-Intanethi.
Olunye lokulunga kwezinye ze-20 iitemplate ze-HTML5 eziphendulayo Nguwe ukuhambelana nalo naliphi na iqonga, Nasiphi na isikhangeli kwaye baphatha iimpazamo ngendlela elula. Ukuba ujonga uyilo lwewebhusayithi yakho oluphethe imeko yoyilo lwalo nyaka mtsha, qhubeka ubambe enye yezi templates zewebhu ziphendulayo.
1 Isandla soncedo
2 Ukutyibilika kwikhephu
7 App yeFowuni
9 Ifemu yezolimo
10 Costamar Uhambo
11 Umfanekiso omkhulu
15 Indawo egqibeleleyo
16 Bhaka enye
Itemplate yobungcali, icocekile kwaye icacile ezinokuthi zilungiselelwe iimfuno zomsebenzisi.
Sisebusika kwaye bhetele kunetemplate ngeli xesha nakubathandi bemidlalo efana nokuskiya. Njengangaphambili, inokuba yeyomntu.
Okunye template ephendulayo ye-HTML5 ongenakukuphosa.
Ngeekholamu ezi-2 kunye ne- ubeko «Fixed Widht» Okubalulekileyo kunokuba yitemplate oyifunayo.
Itemplate yasimahla eyilelwe nge-HTML5 kwaye ikhutshwe phantsi kwe- Iphepha-mvume lokuyila eliqhelekileyo eli-3.0.
Itemplate yewebhu ye-HTML5 kunye ne-CSS3 ene Ugxininiso kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe kuzo zonke iintlobo zamashishini.
Yenzelwe iwebhusayithi yakho, usetyenziso lwezixhobo eziphathwayo, iimveliso ezintsha okanye ezinye iinjongo. Iyaphendula kwaye ine ijongeka intle kuzo zonke iintlobo zezixhobo.
Itemplate ephendulayo iiwebhusayithi ezinomxholo wemfundo.
Kuzo zonke iintlobo zamashishini ezinxulumene nezolimo le template efanelekileyo.
Itemplate ngobungcali kwaye ucocekile yeearhente zokuhamba. Inokwenziwa ibe yeyakho njengoko ufuna.
Enye itemplate umgangatho ophezulu.
Un itemplate yasimahla yezixhobo eziphathwayo. Iimpawu ezinjengegalari yomfanekiso kunye nokunye.
Kwabo bayaziyo qala kuyilo lwewebhu.
Ekhethekileyo itemplate yabathathi beefoto, iiwebhusayithi zobuqu nezamashishini.
ukuba i-ayijenti yokutyelela okanye abakhokeli babakhenkethi.
Ikhonza zonke iintlobo zeenjongo okanye umxholo.
Ngenxa ye I-Twitter Bootstrap sikhokelo.
El Ukugxininisa kumbala oluhlaza kunye nobumnyama kunye nezinye iimilo ezininzi.
Con iimilo ezinomtsalane kunye nobeko lwephepha elinye.
Ngamacandelo ama-6 eRoller alungile itemplate yabathathi beefoto.
Uncedo lwayo nayiphi na kwezi Iitemplate ze-HTML5 Kungenxa yokuba ungaziguqula ngendlela othanda ngayo kwaye azidingi kulondolozwa njengoko kusenzeka kwabanye abaphathi bomxholo njenge-WordPress apho kuya kufuneka uhlaziye iiplagi kunye nomxholo ngalo lonke ixesha elincinci.
Ukuba ufuna ukuseta iprojekthi yewebhu ephendulayo ngokufika okuninzi, ezi iitemplate zewebhu eziphendulayo Zezona zikhetho zibalaseleyo kuba ukongeza ekungafunekiyo ulondolozo, ixesha labo lokulayisha liya kuba ngaphantsi kunayo nayiphi na i-CMS.
Ngaba uyazi iindawo ezingakumbi onokufumana kuzo iitemplate ze-HTML5 eziphendulayo simahla? Sishiyele izimvo kwaye usixelele ngezixhobo zakho ukuze ufumane ezi ntlobo zezixhobo eziluncedo kubayili bewebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Iitemplate ze-HTML5 eziphendulayo
Enkosi ngezindululo ozinikezelayo ngolu ngeno.
Iya kuba luncedo olukhulu kwabaninzi.
Kwimeko yam ndithenge itemplate endiza kuyisebenzisa kwibhlog, yi "Responsive html5" ..
Inyani yile, bendicinga ukuba xa ndiyithengile, iza kuza nesikhokelo, ukundinceda ndiyibeke njenge template yesampulu endiyithengayo ikhangeleka ngathi. Kodwa hayi, ayizisanga nto, umntu othengise kum akanaso isikhokelo kwibhlog yakhe kwaye ... andikabi nakho ukuyisebenzisa okwangoku.
Ndikhangela umntu owaziyo ukuba angalusebenza njani olu hlobo lwetemplate ukuba acele inkonzo yakhe kwaye andincede ndiyifake kwibhlog yovavanyo, ekufuneka ndikope ikhowudi kwaye ndiyincamathisele kwibhlog apho ndifuna ukuyisebenzisa.
Ukuba ukhona umntu omaziyo, okanye ngokwakho, ungandazisa ngezi zimvo zilapha?
duper enkulu sitsho
epale mano sele uyazi ukuba ungayifaka njani itemplate kwibhlog ndikwimeko efanayo
Phendula kwi-duper enkulu
umnikelo olunge kakhulu wokukhuphela kwaye ndiza kuzama ... Ndiza kubuya!!!!
Ngaba umntu unokundixelela ngendlela ekubhekiswa ngayo ngokuchanekileyo itemplate enje ngala anelayisensi ye-Creative commons 3.0 kwiwebhusayithi yam?
Inezithole ezilungileyo kakhulu, enkosi
Izicelo ezi-6 ezikwi-Intanethi zoHlelo lweMifanekiso eBatch